Uncategorized – Page4– TajaNepal
देउवाको बाटोमा ओलीको तमासा
कता अल्झियो नेकपाको नेतृत्व ?
महाप्रबन्धक किन छनोट भएन ?
सिंहदरबारले देखाएन स्वच्छता
आईजीपीले ताने अर्दलीको लस्कर
प्रहरी प्रशासनका सईसा’पको कमाइ
यात्रुमाथि ट्राफिकको अत्याचार
बैङ्कले सेयर ब्रोकर पाउँदैमा सुधार होला ?
यस कारण मिच्छ भारतले सीमा
चोलेन्द्रको शिरमा तरबार
EnglishJanuary 16, 2019
त्यसै भएर थप्पड खान्छन् नेता ! काठमाडौँ । पार्टी सत्तामा जानासाथ राष्ट्रको ढुकुटीबाट आफन्त र कार्यकर्तालाई उपचार खर्चका नाममा पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा नेपाली काँग्रेस र नेकपाबीच बढेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालको ९…
EnglishJanuary 9, 2019
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पत्राचार गर्दै बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएको छ । यससँगै लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बैङ्कले नै ब्रोकर लाइसेन्स पाउने हो अथवा सहायक कम्पनीमार्फत्…
राष्ट्रपतिले ख्याल नगर्दा !
काठमाडौँ । राष्ट्रपति आफैँ सरकार प्रमुख आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष । अझ भन्ने हो भने दासढुङ्गा घटनाको छानबिन टोलीका नेता नै खड्ग ओली थिए । तर विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिको तहबाट दासढुङ्गा घटनाका बारेमा रामकुमार वान्तवा राईको…
आईजीपीका बारेमा गृहमन्त्री चुपचाप
काठमाडौँ । पार्टीमा विवादरहित र सङ्गठनमा कुशल रामबहादुर थापा ‘बादल’ले काम गर्नै नदिने विगतका गृहमन्त्रीहरूलाई घेराबन्दीमा पार्ने संस्कारको सुरुमै नियन्त्रण गरेका छन् । गृहमन्त्री बादलले त्यो प्रक्रिया नअपनाएको भए उनको कार्यकक्ष उनी मन्त्रालय नपुग्दै खचाखच…
वीरगन्ज । तेस्रो मुलुकबाट मरिच आयात गरेर भारत तस्करी गर्ने क्रम बढेको छ । भारतमा भन्दा भन्सार कम भएको फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले मरिच आयात गरेर तस्करी गरिरहेका छन् । केही समयअघि सम्म साइकल र…
१४ सांसद पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्शदाता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्मा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक–एक जना सांसदलाई मनोनीत गरिएको छ । सिन्धुलीबाट हरिबोल गजुरेल, काठमाडौँबाट गगन थापा, दोलखाबाट पार्वत गुरुङ, रामेछापबाट श्यामकुमार श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकबाट अग्नि सापकोटा, काभ्रेबाट गङ्गा…
पाँच वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि चीन जाँदैछन् । भारतबाट फर्किएसँगै बेइजिङ जाने तयारीसमेत भइरहेको छ । अप्रिल ८ देखि चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा हुने एसियाका लागि बोआओ मञ्ज (बोआओ फोरम फर…
प्रशासनिक अराजकताको बीउ को ?
राष्ट्रको ढुकुटीको चासो छैन । देउवा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुन चाहेका ९६५६ मध्ये ५ सचिव, ३८ सहसचिव, १५८ उपसचिव, १४ सय अधिकृत तहका थिए । उनीहरूको निमित्त ५ देखि ७ वर्षको एकमुष्ट तलब…
धम्की र त्रासकै भरमा चन्द
काठमाडौँ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचमा एकता हुँदैछ । त्यो पनि जनताले निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमतको भारी बोकाएको समयमा । सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र नीतिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठाउँमा ल्याउँछ र जनताको सेवक बनाउँछ । माओवादी जनयुद्धको सपना…
नेपालको शिर नझुकोस्
ईश्वरी वाग्ले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्रराष्ट्र भारतको छोटो भ्रमणमा जाने तयारी हुँदैछ । नेपाल र भारतबीचको पुरानो सम्बन्धमा भारतले नेपालसँग योजनाहरू लिन्छ तर बनाउँदैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली…
देउवाको बाटोमा ओलीको तमासा January 16, 2019
कता अल्झियो नेकपाको नेतृत्व ? January 16, 2019
महाप्रबन्धक किन छनोट भएन ? January 16, 2019